Soria, ny paradisan'ny biomass | Fanavaozana maintso
Soria, ny paradisan'ny biomassa
Tomàs Bigordà | | Mitsitsy angovo, Biomassa, Angovo azo havaozina
Soria dia nanolo-kevitra ny ho tanàna Espaniola voalohany manana karbaona aotra. Nanomboka ny taona 2015, vovo-gazy na gazoala dia soloina angovo azo havaozina hafa ho an'ny famatsiana rano mafana sy fanafanana. Tetikasa mitentina 14 tapitrisa euro, miaraka amin'ny famatsiam-bola ny Ivon-toerana ofisialy ofisialy (ICO), izay nandany efatra tapitrisa tamin'ny alàlan'ny orinasam-pitantanana renivohitra Axis, ary ny Suma Capital ao Barcelona.
Ny tamba-jotra hafanana Soria, nantsoina ny fandraisana andraikitra tantanan'ny orinasa Soria Rebi, an'ny vondrona Amax bie, efa manana mpanjifa 8.000 aorian'ny nahavitany ny dingana voalohany. Tafiditra ao amin'ny vondrom-piarahamonina tompona ka hatrany amin'ny hotely, hopitaly, sekoly, dobo filomanosana, trano fitaizana be antitra ary rafi-panjakana.
Ny zavamaniry biomassa ho an'ny fampiasana mafana, manana herinaratra 18kw, mandany akora ala 16.000 taonina isan-taona, izay miteraka ora 45 tapitrisa kilowatt isan-taona.
Manana mpiasa 50 ny orinasa, ary ity manalavitra gazy karbonika 16.000 taonina(CO2) isan-taona. "Manampy amin'ny famerenana ny ala izahay ary hitazona azy io ho madio," hoy i Alberto Gómez, tale jeneraliny.
Ny tambajotram-pifandraisana dia 28 km mikatona anaty rano mihidy anaty tany, hoy ny fanazavan'i Borondo. "Ny ala ao anaty ala dia apetraka ao amin'ilay zavamaniry, miaraka amina vinaingitra biomassa telo enina megawatt isanisany, aorian'ny fizahana sy sivana. Manakana ny sampana rehetra tsy hanentsina ny rafitra izany ”, hoy ihany izy.
Mafana ny rano amin'ny hafanana ateraky ny dingan-doro ary avy eo alefa amin'ny alàlan'ny fantsona mankany amin'ny tanàna, hoy hatrany. Isaky ny trano tsirairay, ny orinasa dia mametaka takalon'ny fifanakalozana, izay mahatonga ny rano ao amin'ny faritra misy azy tsy hiankina amin'ilay trano. "Manome toky izahay amin'ny 10% ka hatramin'ny 25% ny tahiry, arakaraka ny tahan'ny voafidy; ny herinaratra lany fotsiny no alefa noho ny metatra sasany mandrefy ny angovo nafindra any an-trano ”.
2 Fivoaran'ny biomassa any Espana
2.1 Inona ny Observatoriobiomasa.es?
2.2 Tabilao 1: Fivoaran'ny isan'ny fametrahana biomassa any Espana
2.2.1 etona amin'ny
2.3 Tabilao 2: Fivoaran'ny hery biomassa tombanana any Espana (kW)
2.4 Tabilao 3: Fivoaran'ny angovo namboarina tany Espana (GWh)
Manitatra ny serivisy any afovoany sy atsimon'i Soria i Rebi, izay antenain'izy ireo hahatonga ny isan'ny mpampiasa ho 16.000. Mba hamenoana io fangatahana mitombo io dia nanatevin-daharana ny orinasa fitaovana vaovao (accumulator inertial) amin'ny fitehirizana angovo hafanana sy ny rafitra paompy rano. "Hitanay tany Eropa fa manatsara ny fahombiazany izany fa tsy mametraka fitaovana fandoroana hafa," hoy i Borondo.
Tsy ilay any Soria irery no tetikasa. Nanomboka nikaroka ity orinasa ity ny vondrona tamin'ny taona 2009, nahita ny mety ho ala any Castilla y León sy ny fifantohana amin'ireo tranobe misy fantsom-boasary fosily any amin'ny faritany misy ririnina mangatsiaka be.
Noho izany, ny tamba-jotra voalohany dia nipoitra tao amin'ny tanànan'i Soria ao Olvega, miasa hatramin'ny 2012, na ao amin'ny University of Valladolid. Vao nidina tany Aranda de Duero (Burgos), taorian'ny fifanarahana nifanaovana tamin'ny lapan'ny tanàna Arandino hanome trano sy orinasam-panjakana 3.000 tapitrisa, miaraka amin'ny fampiasam-bola valo tapitrisa.
Hanomboka amin'ny volana oktobra ireo asa ary hiasa ao anatin'ny roa taona, hoy izy ireo mialoha. Miitatra hatrany ny drafitry ny orinasa Guadalajara (Castilla-La Mancha), amin'ny fizotran'ny fahazoan-dàlana.
Fivoaran'ny biomassa any Espana
Manaraka izany dia hahita sary hafa isika, izay mampiseho ny fivoaran'ny telo amin'ireo antony lehibe ny sehatry ny angovo: angovo tombanana amin'ny kW, isan'ny fametrahana ary angovo vokarina ao amin'ny GWh. Ny loharanom-baovao dia ny tranonkala miavaka amin'ny sehatra: www.travelatoriobiomasa.es.
Inona ny Observatoriobiomasa.es?
La Fikambanana Espaniôla ho an'ny fanamafisana ny angovo biomassa (AVEBIOM) namorona ity tranokala ity tamin'ny 2016 hatramin'ny mitondra data biomassa sy tombana ho an'ny olona betsaka araka izay tratra, miaraka amin'ny tanjona kendrena indrindra hiaraha-miasa, amin'ny sehatra iray ihany, fampahalalana momba ny fampiasana biomass thermal any Espana.
Misaotra ny angon-drakitra AVEBIOM manokana sy ireo nomen'ny National Observatory of Biomass Boiler ary ny Index ny vidin'ny biofuel, ho fanampin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa sy orinasa ao amin'ny sehatry ny biomassa, afaka miteraka fivoarana, fampitahana ary manome data sy tombana.
Tabilao 1: Fivoaran'ny isan'ny fametrahana biomassa any Espana
Ohatra iray mazava amin'ny firoboroboan'ny teknolojia ity dia ny fampitomboana ny isan'ny fametrahana amin'ity karazana angovo azo havaozina ity.
Ny angona farany azo dia mampiseho fa tamin'ny 2015 dia nisy 160.036 fametrahana tao Espana. Fisondrotana 25 isa isan-jato raha oharina tamin'ny tamin'ny taona lasa, izay 127.000 XNUMX mahery ny tarehimarika.
8 taona lasa izay, tsy nisy fametrahana 10.000 ary tamin'ny 2015 dia efa nihoatra ny 160.000 izy ireo, mazava fa ny fivoarana sy ny fitomboan'ny biomassa eto amintsika dia zava-misy azo hamarinina ary hita mazava.
Tsiahivina fa ireo boiler ireo dia ampiasaina ho loharanom-angovo biomassa ary ho an'ny famokarana hafanana ao an-trano sy tranobe. Ampiasaina ho loharanon'angovo izy ireo solika voajanahary toy ny pellet hazo, lavaka oliva, sisa tavela amin'ny ala, akorandriaka sns. Izy ireo koa dia ampiasaina hanafanana rano amin'ny trano sy tranobe.
Tabilao 2: Fivoaran'ny hery biomassa tombanana any Espana (kW)
Vokatry ny fiakaran'ny isan'ny fametrahana dia ny fiakaran'ny herinaratra tombanana.
Ny totalin'ny herinaratra napetraka ho an'i Espana dia 7.276.992 kW tamin'ny 2015. Mampitaha azy amin'ny vanim-potoana teo aloha, ny herinaratra napetraka rehetra nitombo 21,7% raha oharina tamin'ny 2014, izay teo ambanin'ny 6 tapitrisa fotsiny ny tombantombana kW.
Ny fitomboana niainana tamin'ny resaka herinaratra napetraka tanteraka nanomboka tamin'ny 2008 ka hatramin'ny data farany nomena tamin'ny 2015 dia 381% izany, mandeha 1.510.022 kW ka hatramin'ny 7.200.000 mahery.
Tabilao 3: Fivoaran'ny angovo namboarina tany Espana (GWh)
Mba hamaranana ireo sary dia hodinihinay mandritra ny 8 taona lasa izay ny angovo aterak'ity angovo any Espana ity.
Toy ny refy roa teo aloha, ny fitomboana dia tsy miova mandritra ny taona maro lasa 2015, miaraka amin'ny 12.570 GWh, ny taona manana ny habetsahan'ny GWh avo indrindra. 20,24% mihoatra ny tamin'ny 2014. Ny fiakaran'ny angovo vokarin'ny biomass hatramin'ny 2008 dia 318%.
Ny fampidirana ny biomassa amin'ireo loharano angovo lehibe eto amin'ny firenentsika dia mitohy tsy tapaka. Mba hahita mazava ny fivoarany miabo jereo fotsiny ny angona 2008.
Nandritra io vanim-potoana io dia nisy fametrahana 9.556 izay namokatra angovo tombanana 3.002,3 ​​GWh miaraka amin'ny herin'ny tombatombana 1.510.022 Kw ary tamin'ny 2015 misy angona, dia nitombo ho 12.570 GWh ny angovo vokarina, ny fametrahana 160.036 ary ny hery 7.276.992 Kw.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Soria, ny paradisan'ny biomassa
Mangataka izy ireo hampitombo ny fitaovana hisorohana ny fandoroana trano